I-Semalt's Auto & i-SEO Egcwele Iyikhulisa Kanjani i-SEO yakho
Ingabe ibhizinisi online, usomabhizinisi, noma freelancer ongenakubonakala sengathi uthole iwebhusayithi yabo ukuthambeka okufanele? Uke wazama ukungena ezweni le-SEO, kepha bekudida futhi kukhungathekisa ukugoqa ingqondo yakho ngenkathi ulawula ukusebenza kwebhizinisi lakho nsuku zonke? Awuwedwa.
Ukuze wenze iwebhusayithi yakho ibekwe kahle yiGoogle futhi idale okuqukethwe okuheha ithrafikhi eningi esizeni sakho; kufanele usebenzise amasu we-SEO ngempumelelo nangendlela efanele. Futhi ngenkathi ungazama ukusebenzisa la masu uqobo, kungenzeka kakhulu ukuthi uzokwenza amaphutha angakubiza. Khumbula: ayikho i-SEO engcono kune-SEO embi. Ungathola imiphumela esheshayo ngokuthumela umsebenzi we-SEO kubantu abaye bacwilisa iminwe yabo ku-SEO isikhathi eside kunawe futhi babe nerekhodi lokufakazela lokuthola amawebhusayithi ama-SEO rankings amahle.
ISemalt iyinhlangano eyaziwa kakhulu ye-SEO kanye ne-ejensi yokuthengisa yedijithali eye yasiza amabhizinisi amaningi ukuqinisa ubukhona bawo be-intanethi. Ngeqembu elinolwazi lababhali kanye nonjiniyela be-SEO, uSemalt unikeza okuqukethwe okuhle kwekhwalithi nemikhankaso ye-SEO ephumelelayo yokwandisa ithrafikhi nesikhundla.
Kuzwakala kukuhle kakhulu ukuba yiqiniso? Qhubeka ufunde ukuze wazi okuningi.
I-AutoSEO: Ukusuka Kucwaningo lwegama elingukhiye kuya ekuqinisekisweni kwekhasi
Uma ufuna ukukhulisa ukuthengisa online kodwa ungakulungeli ukusebenzisa amathani imali ku-SEO ngaphandle kokwazi imiphumela yayo, i-AutoSEO iyithuluzi eliphelele elizokunikeza imiphumela emihle ngentengo ebizwayo. Nazi zonke izindlela umkhankaso wakho we-SEO ongathuthuka ngazo nge-AutoSEO:
Kuthuthukisa Ukubonakala Kwewebhusayithi Yakho:
Amakhasimende ngeke akwazi ukubona imikhiqizo noma izinsiza zakho uma iwebhusayithi yakho ingabonakali ku-inthanethi. Ukuphela kwendlela abangathola ngayo imikhiqizo yakho kwi-inthanethi ukuthi iwebhusayithi yakho ibalwe.
Ngokufanayo, ukuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho akuyona inqubo lapho ungathatha khona izinqamuleli, kudinga isikhathi nokuzinikela; noma ngubani okukunikeza amakhambi esikhashana uzokwenza ukuthi iwebhusayithi yakho ifakwe ohlwini lwabodwa noma ihlawuliswe i-Google okukubi njengoba kuzwakala.
Nge-AutoSEO ungaqiniseka ukuthi iwebhusayithi yakho izobalwa ngokusebenzisa amasu amhlophe wezigqoko ahlolwe ukuthi alethe imiphumela enamabhizinisi amaningi.
Ukuthuthukisa ukubonakala kwewebhusayithi yakho kuyisinyathelo sokuqala sokwandisa ukuhanjiswa kokuthengisa, kanye nokwenza ithrafikhi esebenzayo, yingakho isu le-bulletproof ye-AutoSEO lizokwenza ukuthi iwebhusayithi yakho ibekwe phambili yi-Google ibekwe phambili ngabakwaGoogle ngokusebenzisa amagama agqunywe ngokucophelela ngesikhathi esifanele.
I-On-page Optimization Konke Okunakekelwa Kwe
Sikhulume ngokubonakala kwewebhusayithi nokuthi kubaluleke kanjani kumakhasimende ukubona imikhiqizo yakho. Okuqukethwe ekhasini okuthinta kakhulu ukubonakala kwewebhusayithi yakho.
Kunokuningi okungena ekusebenzisekeni kwekhasi: ukuthi okuqukethwe kwakho kubhaliwe kangakanani, amagama angukhiye ayimvelo afakiwe ngokwemvelo namagama asemqoka e-LSI; ukhiqize izixhumanisi zangemuva, ezilungiselelwe imethadatha, futhi waqamba iwebhusayithi enomklamo omuhle we-UX / UI?
I-SEO esekhasini iphathelene nokwenza ngcono izincazelo zamawebhusayithi ukuze abakhaseli bewebhu bathande ukuqonda iGoogle. Abakhandi bewebhu ngamarobhothi aqonda ingqikithi yengxenye yokuqukethwe online ngokuqonda ukuthi wethulwa kanjani. Lokhu kufaka hlangana ukuhlaziya okwenziwe ngemaphutshu kwewebhusayithi ye-HTML kanye nokusebenzisa izixhumanisi ezingaphakathi nangaphandle ukuze zinqume umongo wokuqukethwe okukhona.
Ukusebenziseka kwekhasi kungabonakala kukhulu futhi kuyisicefe ukusisebenzisa kepha yingakho i-AutoSEO isindisa impilo! Kudinga ukunakekelwa konke ozodinga ukuthuthukisa amazinga akho we-SEO futhi uthuthukise ukuhlaziya kwakho. Uma usuqalile ngomkhankaso we-AutoSEO, uzoba nombiko onemininingwane ngezinto ezihlukile zewebhusayithi yakho ezidinga ukuphuculwa ngezinga elingcono.
Ucwaningo lwegama elingukhiye lweNiche yakho
Ukufaka imikhiqizo noma izinsiza zakho ku-inthanethi futhi ucabanga ukuthi isivakashi sizothuthela kuwebhusayithi yakho akwanele. Udinga ukushiya ama-breadcrumbs wamakhasimende akho angahle afike kuwe. Lawo ma -crcrumbs angamagama asemqoka futhi isu elicwaningiwe kahle lamagama angukhiye lizothuthukisa amazinga akho ngokungafani nezinye.
Ucwaningo lwegama elingukhiye luyikhono. Kubandakanya amagama angukhiye angewona nje ivolumu ephezulu kepha acacisiwe ku-niche ibhizinisi lakho olisebenzayo kudinga umzamo wokudala. Inhlanganisela yokusebenzisa amagama angukhiye omude kanye neyodwa yomsila omfishane ngenkathi uqinisekisa ukuthi ayahambelana nesizinda sakho ibaluleke kakhulu.
USemalt uyakuqonda ukubaluleka kokuthola amagama angukhiye ongeke nje andise ithrafikhi kodwa futhi uwaguqulele ekuthengiseni okungenzeka futhi. Ungahle uphumule kalula wazi ukuthi ibhizinisi lakho online lisezandleni ezinhle. Ngomkhankaso we-AutoSEO, onjiniyela bakwa-SEO bakwaSemalt bazohambisa amagama angukhiye angaqondile i-niche yakho kuphela, kodwa futhi bakhiqize traffic okuhle nokuthengisa.
Imibiko Yokuhlaziya Ukubuyekeza Ukusebenza Kwakho
I-AutoSEO izokwakha futhi imisebenzi eningi efanelekayo kuma-analytics akho. I-Semalt yisikhungo sokuthengisa esidijithali esigcwele esikholelwa emiphumeleni futhi sinayo.
Kuzo zonke izindlela i-AutoSEO ezithuthukisa ngayo izinga lewebhusayithi yakho, ama-analytics ayo ahlinzeka ngokuhlelwa nsuku zonke kwamagama angukhiye asethuthukiswa manje ukuze wazi ukuthi imali yakho isetshenziswa kahle. Alikho isu elilodwa elizoqinisekisa impumelelo kuwo wonke amabhizinisi akunandaba nokuthi iyini i-niche yawo, wonke amawebhusayithi ahlelwa ngokuhlukile ngokuya ngamasu we-SEO awasebenzisayo. Ukuba nama-analytics okukhombisa ukuthi lawamasu enza kahle kangakanani kuzokusiza wenze izinqumo ezingcono futhi uthuthuke ezindaweni ezidinga usizo olwengeziwe.
Umphathi wakho we-Semalt - otholakala nganoma yisiphi isikhathi - uzokunikeza imibiko yokuhlaziya nge-imeyili nangesistimu yezaziso zangaphakathi, ukukwazisa ngemikhankaso eqhubekayo.
I-FullSEO: Ukusuka ekubhaleni Okuqukethwe Ukuxhumanisa i-Election & Beyond
I-Semalt futhi ihlinzeka nge-FullSEO uma ufuna ukwenza iwebhusayithi yakho ihambisane ngokugcwele ngokuya ngamazinga we-SEO, nakhu ozobe uthola:
Ukubhala Okungenaphutha kokuqukethwe kanye nekhophi yewebhusayithi
Ungaba namagama angukhiye asebenzayo afunwayo kepha awusoze wabalwa noma ukhiqize ithrafikhi uma okuqukethwe okukhuphayo kunganikezi umfundi wakho inani elifanele. Ukuba nokuqukethwe okungadingeki nje, kepha ukuxazulula izinkinga nokufundisayo kuyisihluthulelo sokugcina labo bafundi. USemalt unethimba lababhali abaloba kahle ukuthi luhlobo luni lokuqukethwe luzokhulisa ithrafikhi yewebhusayithi yakho nokuthengisa ngokunjalo.
Isixhumanisi Sokwakha & Ngaphandle
Kunezinto eziningi ezingena emkhankasweni osebenzayo we-SEO ngaphandle kocwaningo lwegama elingukhiye. Ukwakha isixhumanisi okusebenzayo - ingxenye ye-off-ikhasi (i-SEO yezobuchwepheshe) ingenye yazo. Ukuqinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho yenziwe kangcono ngezixhumanisi zangaphakathi nezangaphandle ngenkathi kususwa izixhumanisi ezingalungile noma ezingasebenzi kubalulekile. Ithuluzi leSaltalt's FullSEO liqinisekisa ukuthi konke ukuthuthukiswa okumayelana nokwakhiwa kwesixhumanisi kusingathwa kahle ukuze inani lokuxhumeka kwekhwalithi ephezulu kwekhasi lakho lewebhu likhuphuke kakhulu izinga lewebhusayithi yakho eSERP ukukhulisa futhi. Kufaka ukungeza izixhumanisi ezisele zenani eliphakeme kuwebhusayithi yakho ezine-UR / DR ephezulu.
Ukulungisa Amaphutha Ewebhusayithi
Izikhathi eziningi, amawebhusayithi enamaphutha amaningi noma izixhumanisi ezingekho kahle ezingabhekwa uma ungazi kahle ubuchwepheshe bewebhu njenge-HTML. Nge-FullSEO, kuhlaziywa kabanzi ngewebhusayithi yakho lapho kunakekelwa khona i-nook ngayinye ukuqinisekisa ukuthi amazinga ayisisekelo we-Injini Yokucinga ye-Google ayahlangabezana.
Ngokuhlaziywa kwe-semantic, uhlu lwawo wonke amaphutha enziwa futhi lumiswa ngabakwaSemalt abasezindlini ze-SEO engineering. Zonke izinguquko ezidingekayo zizokwaziswa kuwe nge-Semalt SEO. Iwebhusayithi yakho yenziwe kahle ukuze abakhaseli bewebhu bayiqonde kangcono futhi bayilinganise phezulu endaweni yakho yokusesha eqondiwe. Unikezwe umphathi, ozokugcina uvuselelwa ngayo yonke intuthuko.
Njengoba sishilo phambilini, nge-FullSEO uzothola ukubonisana nethimba lethu lochwepheshe ukwakha isu le-SEO elizokusebenzela kangcono. Iqembu litholakala nganoma yisiphi isikhathi kunoma yimiphi imibuzo ongaba nayo futhi imigqa yokuxhumana ihlala ivulekile.
Umphathi wakho uqobo uqapha inqubekela phambili yemikhankaso yakho ye-FullSEO nsuku zonke futhi akuvuselela ngesikhungo sombiko ngemibiko yokusebenza ngokuningilizayo yokuhlonza ukuthi imikhankaso iqhuba kanjani.
Iqembu lokusekelwa kanye nemenenja yakho ye-SEO ekhona ukuze aqinisekise ukuthi uthola insiza enhle ngenkathi esebenza kanzima ekwebiseni iwebhusayithi yakho nokwenyuka kwethrafikhi.
I-Semalt yi-ejensi yedijithali eyodwa eyothatha indawo yakho yewebhusayithi nokuhlaziywa kube ngamanani amasha empumelelo. Ukuthi ukhetha ukuhamba nomkhankaso we-AutoSEO noma we-FullSEO uzothola ukwesekwa okuqhamuka eqenjini labachwepheshe abaqeqeshiwe emkhakheni we-SEO nokuthuthukiswa kwewebhu. Ungathemba ukuthi ubukhona bakho be-inthanethi busezandleni zikaSemalt ezisize amabhizinisi amaningi ukuthi achume futhi iwebhusayithi yakhe ibekwe phezulu yiGoogle.
Uma unentshisekelo yokuqalisa, thintana nethimba lethu ukuthola ukuthi yini ezokufanela kahle nebhizinisi lakho.